Firaisana ara-nofo mifanaraka amin'ny drafitra mifanohitra amin'ny filan'ny nofo tampoka
Pejy misimisy momba ny fiaraha-miasa sy ny tantaram-pitiavana / ny erotisma
Miaraka amin'ny fahaterahan'ny zaza, manomboka amin'ny mpivady ny toko vaovao sy mahaliana amin'ny fiainana. Fa miaraka amin'izay dia mifarana ny fotoana mangina ho an'ny roa. Ny volana voalohany miaraka amin'ny zaza dia miavaka amin'ny alina tsy misy torimaso sy fanamby vaovao maro izay entin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny zaza. Matetika dia kely ny fotoana - ary ny toerana - ho an'ny fitiavana sy ny firaisana.
Meteza ho ray aman-dreny - mbola mijanona ho mpifankatia
Tsy midika akory izany fa mpamono olona ny ankizy. Fa ny tena izy dia mila miasa mafy ny ray aman-dreny hijanona ho olon-tiana noho ny mpivady tsy manan-janaka. Mazava ho azy fa miova ny laharam-pahamehana rehefa teraka ny zaza, fa ny filàna ara-batana sy ara-pihetseham-po dia tsy hanjavona tampoka eo am-piterahana.
Fa ny ray aman-dreny kosa dia hijanona ho mpankafy - © Photographee.eu / Adobe Stock
Manana andraikitra ambany fotsiny izy ireo, fa na ho ela na ho haingana dia samy maniry hanana fotoana bebe kokoa ho an'ny tenany ny roa tonta.
Ny ray aman-dreny koa dia mila filan'ny nofo
Ny kanto amin'ny tsy maha-fianakaviana fotsiny, fa ny sisa mpitia kosa dia resaka fandaminana fotsiny. Voalohany indrindra, na izany aza, tsy maintsy miaiky amin'ny tenanao ianao fa misy zavatra tsy ampy anao ary mitady resaka amin'ny vadinao ianao. Angamba mahatsapa toy izany koa izy ary miditra am-baravarana misokatra. Rehefa dinihina tokoa, ny ray aman-dreny dia tsy tokony ho menatra ny tenany satria maniry ny akaiky ara-batana. Ho fanampin'izany, mandray soa ny ankizy rehefa manana fiainana ara-nofo mahafa-po ny ray aman-dreniny satria manampy azy ireo ho falifaly sy ho tony kokoa izany.
Miaraka ianareo dia afaka mieritreritra ny fomba ahafahanao mampiditra fotoana bebe kokoa ho an'ny roa amin'ny fiainana andavanandro. Zava-dehibe ny hanaovanareo roa tonta ny zavatra rehetra azo atao mba hitakiana ireo fotoana ireo miaraka - avy amin'ny tenanareo, avy amin'ny zanakareo ary avy amin'ilay olona mety hiditra ho mpitaiza. Tsy misy fialan-tsiny!
Raha mbola tanora ny zanakao dia tsara kokoa ny mampiasa fotoana alohan'ny hatory hiresahana sy hifanakalozana karatra. Ilaina izany raha esorina ny lohahevitra "zaza". Ireo fotoana ireo dia tokony ho anao sy ny vadinao ihany. Miezaha tsy hiraharaha lohahevitra mandreraka hafa mandritra ny fotoana fohy: afaka miatrika an'ireny ianao amin'ny takariva iray hafa mandritra ny herinandro.
Raha vao matory mandritra ny alina ny zanakao dia tsy misy maharatsy ny fanakaramana mpanampy zaza. Mitandrema amin'ny hariva tsy an-jaza lavitra ny tranonao tsy tapaka, ohatra, indroa isam-bolana, ohatra. Ny fifandraisanareo mivady dia hanamafy ny fifandraisanareo rehefa mihaona amin'ny namanao ianareo, misakafo hariva am-pitiavana na mijery sarimihetsika amin'ny sinema, toy ny tamin'ny andro taloha. Ny traikefa mahazatra dia mihombo.
Raha resaka firaisana ara-nofo dia mpivady maro no tsy sahy manao zavatra mifanaraka amin'ny filany rehefa matory eo akaikin'ny trano ny ankizy. Amin'ity tranga ity dia manana safidy roa ianao: Na manapa-kevitra an-tsitrapo ianao hanararaotra ilay fotoana rehefa milalao baolina na ballet ny ankizy. Ny ankamaroan'ny mpivady dia zatra maka isaky ny minitra maimaimpoana ho azy ireo rehefa tonga ny fotoana mety. Rehefa dinihina tokoa, ny spontaneity dia mety ho manelingelina be koa.
Na azonao atao ny mandamina fialan-tsasatra am-pitiavana ary angataho ny raibe sy bebeny, ohatra, hikarakara ny ankizy. Tsy mampientanentana anao ve ny mametraka daty hanaovana firaisana?
Angamba, fa afaka manantena azy mandritra ny fotoana lava ianao ary tena manana ny sainao malalaka. Rehefa dinihina tokoa, ny tena fitiavam-po dia mety hipoitra raha tsy afaka miala sasatra ianao sy ny olon-tianao ary mamela ny ahiahy isan'andro.
olana eo amin'ny fifandraisana
Fiaraha-miasa amin'ny ankizy
Mpivady efa miloko efa vonona